Ụbọchị My Pet » 5 Ụdị mbụ Daters. Kedu One Ị?
site Samantha Greaves
emelitere ikpeazụ: Jan. 12 2021 | 3 min agụ
E nwere ndị ọkà mmụta sayensị na-mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. The mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụ pụrụ iji tụnyere a onwu nnwale ebe ị na-atụ anya na gị na ụbọchị otú ibe na-eme dị mma mma.
A ọma ụbọchị na-adabere na ndakọrịta nke daters. Na ịmara ihe ụdị dater na ị bụ ike inyere gị aka mee ka ndị ọzọ nke gị mma e ji mara n'emebighị onye ị bụ.
Ya mere, ihe ụdị dater ị ga-asị na ị bụ?
Ọ bụrụ na ị bụ n'elu-talkative, ị bụ karịa yiri onye ekwurekwu. Mgbe ụfọdụ onyinye gị nke gab nwere ihe na-eme na akwara na obere na-eme a mkpa ka okwu. Mgbe ụfọdụ ị na-ebipụ ndị apụ mgbe na-akparịta ụka, ọ bụghị na nzube nke N'ezie, na ị na enweghị nsogbu na-achọta nri okwu mgbe mmadụ gwara gị ka i na-agwa ha banyere onwe gị. Ị ga-amụta otú ige ntị dị nnọọ ka mma ka ị na-ekwu okwu. Ị chọrọ ijide n'aka na na gị na ụbọchị na-na-amaghị onye ọ bụla ọzọ. Ime nke a ga-enyere gị aka ịmata ma ọ bụrụ na unu abụọ bụ ihe dị mma kwesịrị ekwesị ma ọ bụ megide.
MS. & Mr. Anyị
Ịchọta onye pụrụ dokwara a hụrụ na enyi dị mkpa ka a mbụ dater. Ị na-eme nke a mgbe doro nnọọ anya na mbụ ụbọchị. Tupu ị na enwetatụbeghị mara gị ụbọchị, ị ngwa ngwa ime atụmatụ maka a abụọ ụbọchị na ọbụna getaways ọnụ. Ị nwere ike malite gị ahịrịokwu na ọtụtụ "anyị nwere ike bụ" na-agaghị ezuru "m nwere." Nke a nwere ike inye gị ụbọchị echiche na ị bụ clingy ma ọ bụ na-achịkwa ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị na ọ nwere ike ha na-eme atụmatụ ha ụzọ ọpụpụ tupu onyenchere nwaanyi ike na-enye eji megharịa ọnụ. Ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na-ekwupụta mmetụta gị na-akpụ akpụ gị na mbụ ụbọchị na-esonụ larịị, dị nnọọ ka n'aka na ị na-ekpebi ma ọ bụrụ na gị na ụbọchị chọrọ dị ka gị.
Ị bụ maa onwe ha na-adịghị mkpa onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na-emere ebere onye ị bụ. Freedom bụ a mkpa n'ihi na gị na ihe ọ bụla egwu megide ya ọkọkpọhi cutout nke ndụ gị. Nọgidenụ na-nke a n'uche: mgbe ị na-etinye ndị na-ume nke bụghị mkpa onye ọ bụla ma ọ bụ ịbụ kwa untamable, ọ pụrụ ịbụ a n'aka-apụ gị ụbọchị. Onye ọ bụla chọrọ na-enwe mkpa ụfọdụ ikike. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ ka ụbọchị na achọghị inye gị ụbọchị echiche na ị chọrọ ihe oge obula anya, na-ekwu na. Mbụ ụbọchị bụ oge kasị mma na-etinye ihe niile si na tebụl.
Ọ bụrụ na ị nke ụdị dater, na i maara ụdị onye ị chọrọ ruo aesthetics. Ị ọbụna ndụ gị haziri na a tupu Haziri oge nke isi ndụ ihe dị ka alụmdi na nwunye na ụmụaka. Tupu ị na-eche banyere eweta gị ezigbo agbamakwụkwọ atụmatụ na gị mbụ ụbọchị, nwalee mmiri gị na ụbọchị na-ahụ ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị na ọchịchọ dakọtara elu. Ọ nwere ike ịdị egwu n'ihi na onye na-anụ banyere ihe metụtara mkpebi mgbe ha dị nnọọ chọrọ onye na-aga na fim ndị.
The malitegharịa Reader
Dị nnọọ ka onye agbata obi gị na-idealist n'elu, ị mara ihe ị chọrọ ma ị ma na a bit ọzọ na-echeta otú gị ụbọchị na-eme ka ego ha. Ị nwere ike echiche nke otú ha kwesịrị tojupụtara elu mgbe ọ na-abịa mmetụta ha na ego. Ònye ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-eji na-arụ ọrụ bụ ihe na-akpụzi gị banyere ndị ha bụ. Ịmara ụdị onye ị chọrọ mgbe ọ na-abịa akụkụ nile nke ndụ dị ukwuu. Ka na-agbalị ka a bit ihe na-emeghe ka ụbọchị na ndị na-adịghị kpamkpam izute gị ibiere. I nwere ike anya ma ọ bụrụ na ị daa n'ihi na onye ọ dabara gị ideals, ọ na-eme.
Gịnị Bụ The Point Of Alụmdi na Nwunye?